Shiinaha 3 Inj Dheeman Dheeman suuf ah oo ku wareejinaya dammaanadda alaabada wax soo saarka iyo alaab-qeybiyeyaasha |Dheemanka ZL
3 inch Boondhiga dhoobada ah ee wareejinta dheemanka suufka ah ee Dabaqadda la taaban karo
ZL-16CT Ceramic bond dhogorta dheemanka, sida isku xidhka ku meel gaadhka ah ee ka dhexeeya bond birta iyo resin bond pads polishing, waxay meesha ka saari doontaa xagashada curaarta birta si ka dhakhso badan suufyada isku dhafka ah ee caadiga ah, mana kordhin doonto heerkulka inta lagu jiro shiidamada sagxadaha shubka ah.
Qalab:Dheeman bond ceramik
Isticmaalka:Qoyan oo qallalan
Gawaarida la heli karo:30#, 50#, 100#, 200#, 400#
ZL-16CT dhoobadasuuf dheeman ku meel gaar ahDheefta dhoobada ee nique waxay ka dhigaysaa aaladda mid aad uga sii dagaal badan suufyada polishing resin, ka saar xoqida suufka wax lagu shiidi karo ee birta ah si hufan.
Qaabka cidhifka ah ee Chamfer oo leh boosas ballaadhan oo ay fududahay in la oggolaado slurry inay soo baxaan inta lagu jiro suufka.
Si ballaaran loo isticmaalo suufka dhalaalka ee ku meel gaadhka ah ee u dhexeeya suufyada birta wax lagu shiidi karo iyo suufka dhalaalka resin si loo yareeyo qaar ka mid ah tillaabooyinka suufka suufka si loo badbaadiyo shaqada iyo qiimaha.
Rubber u dhexeeya resin iyo velcro si loo nuugo gariirka iyo isla mar ahaantaana la kordhiyo xabagta u dhaxaysa velcro iyo dheemanka shaqada.
Velcro back for isbedel degdeg ah.Midabka Velcro ee kala duwan ee grits kala duwan.
Inta badan loo isticmaalo Furimaha Dagaalka ee sagxadda sagxadda shubka ah.
Z-LION 16CT dhoobada kala-guurkasuuf dheeman ahWaxa kale oo loo yaqaan suufka isku-dhafan ee dheemanka ah ama suufka dhalaalka ee semi-birta ah.Waa qalab ku habboon kala-guurka oo u dhexeeya biraha shiidida iyo suufka polishing resin ee warshadaha sagxadda rinjiyeynta.Astaamaha gaarka ah ee suufkayaga ku-meel-gaadhka ah ee midabaynta waa sida soo socota:
Dheeman tayo sare leh iyo alaab dhoobo ah ayaa loo adeegsadaa qaacidada si ay suufka uga dhigaan mid dagaal badan si meesha looga saaro xagashada qotoda dheer ee ay ka dambeeyaan suufyada wax shiida ee birta ah ee isku dhafan.
Waqtiga saxaafadda kulul iyo heerkulka ayaa la dejiyay inta lagu jiro wax soo saarka si loo hubiyo tayada joogtada ah.
Xirmada ugu horreysa ee ka dib suufka biraha dahaadhka birta ayaa si dhakhso leh u xidha, xayndaab fiican ayaa ku xidha suufka dhalaalka ee resinku wuu sii jiraa muddo dheer, celceliska nolosha ee 12pcs oo ku wareegsan 5000-12000 cagood oo laba jibbaaran.
Lakabka caagga ah ee adkaanta saxda ah, si loo nuugo gariirka iyo in la kordhiyo xabagta u dhexeysa velcro iyo dhoobada shaqada.Ma jiro velcro diiray si suufka loo isticmaalo dibadda.
suufkan dhalaalaysa ee ku meel gaadhka ah ee loo isticmaalo inta u dhaxaysa suufyada birta ah iyo suufka resinka, waxaanu yarayn karnaa dhawr tillaabo oo suufka resinka ah, waxaanu badbaadin karnaa wakhtiga, badbaadinta shaqada iyo kharashka.
Qurxinta ku-meel-gaarka dhoobada ah ayaa inta badan la isticmaalaa ka dibqalabka wax lagu shiido dheeman bir ahiyo ka hor intaanad suufka dhalaalayn ee resin si aad meesha uga saarto xagashada aan fiicneyn ee biraha wax lagu shiidi karo iyo in la diyaariyo sagxadda shubka ah ee loogu diyaargaroobay in lagu sifeeyo suufka suufka.Qurxinta ku-meel-gaadhka ah ee suufka ah ayaa inta badan aad uga dagaal badan suufka suufka ah.
Hore: Taargo wax lagu shiido dheeman oo laba jibbaaran si ay ugu habboonaato mishiinnada Qalabka sagxada Qaranka
Xiga: Z-LION Suufyada dheemanka dhalaalaysa ee midabka leh ee khafiifka ah ee sagxadda sagxadda shubka ah
Z-LION oo labanlaaban oo rhombus ah qayb trapezoid ah
suufka wax lagu shiidi karo dheemanka naxaasta leh ee faakiumka ah ee la taaban karo
10 inch dheeman shiidi giraangiraha in lagu rakibo s...
Qalabka wax lagu shiido ee Universal oo leh 4 qaybood oo bar...